Foshan Changyuan လူမီနီယံကုမ္ပဏီ, Ltd. Lishui မြို့တွင်တည်ရှိသည်, Nanhai ခရိုင်, Foshan City Guangdong PRC. Dali နဲ့နီးတယ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမီနီယံပစ္စည်းမြို့, ၎င်း၏တည်နေရာအချက်များအပြည့်အဝအသုံးပြုမှုကိုအောင်, ကုမ္ပဏီဟောင်ကောင်နှင့်နီးစပ်သူ, ရှန်ကျန်း, Guangzhou Nansha, ဖoshan Sanshan နှင့်အခြားကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းများ.
Changyuan Aluminum သည်အလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများကိုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်စျေးကွက်များတွင်အမှုဆောင်ရန်အဓိကထားသည်. ၏ပထမတစ်ဝက်၌တည်၏ 2019, ကြီးမားသောလူမီနီယံစက်ရုံ Foshan Nanhai Yonglian Aluminum Factory နှင့် Zhaoqing Guangning Yongshun Aluminum Co., Ltd. Foshan Changyuan အလူမီနီယမ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။, Ltd. လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်. Changyuan Aluminum သည်လူမီနီယံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုအပေါ်မှီခိုသည်, စုစုပေါင်းနှင့်အတူ 11 အပြည့်အဝအလိုအလျောက်လူမီနီယမ်
Extrusion လိုင်းများ (500-2500 တန်ချိန်), တပ်ဆင်ထားသည်4ကြီးမားသောအရည်ပျော်မီးဖိုများ,2ဓာတ်တိုး(သစ်ပင်ကြီး) နှင့် electrophoresis အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, နှင့် 1 Powder Coating လိုင်စင်ပြားများဖြန်းသည်, ထို့အပြင်ငါတို့ထက်ပိုရှိသည် 10,000 စက်ရုံထဲမှာမှို, နှင့်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကျော်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 50,000 တန်ချိန်. ဖောက်သည်များပိုမိုရွေးချယ်မှုပေးရန်အလို့ငှာ, Changyuan Aluminium သည်လူမီနီယံတံခါးများ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်& ပြတင်းပေါက်များနှင့်လူမီနီယံကိုယ်ရံတော်(ခြံစည်းရိုး), ထူထောင်ပြီးနောက်လျှပ်စစ်ရေတိုင်ကီနှင့်အခြားချောထုတ်ကုန်. ယခု Changyuan Aluminum သည်အပြီးသတ်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်, မင်္ဂလာပါ, ရေတိုင်ကီ, နှင့်လျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်ဘောင်. Changyuan Aluminum သည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအရည်အသွေးမြင့်အလူမီနီယမ် profile များကိုထောက်ပံ့ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်.
ဇူလိုင်လထဲမှာ 2019, Changyuan လူမီနီယံကုမ္ပဏီ, Ltd. ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော“ Changyuan CYAL” အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်များ, နှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်. Changyuan လူမီနီယမ်ရဲ့ထုတ်ကုန်, ကုန်ကြမ်းမှလူမီနီယမ် billets / bar မှလူမီနီယံ profile များကိုရန်, လူမီနီယံတံခါးများ&ပြတင်းပေါက်, လူမီနီယံ guardrails, ရေတိုင်ကီ, စသည်တို့. အမျိုးသားအလူမီနီယံစံ GB / T5237-2008 နှင့်အညီတင်းကြပ်စွာဖြစ်ကြသည်, နှင့်အီးလက်မှတ် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပြီ, ISO9001, ISO14001 နှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်. လူမီနီယံတံခါးများအတွက်ဖန်ခွက် &Windows သည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်, ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားရှိပါသည်.
လူမီနီယံ extrusion အလုပ်ရုံ
Foshan Changyuan လူမီနီယံကုမ္ပဏီ, Ltd. ကြီးမားသောအလူမီနီယံစက်ရုံနှစ်ခုနှင့်ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများပေါ်တွင်မှီခိုသည်. ဖoshan Heshun Yonglian Aluminum စက်ရုံသည်anရိယာအကျယ်အဝန်းရှိသည် 20,000 စတုရန်းမီတာ, နှင့်အတူ7အပြည့်အဝအလိုအလျောက်လူမီနီယံထုတ်လုပ်မှု extrusion လိုင်းများ,2ကြီးမားသောလူမီနီယံလှံတံကိုအရည်ပျော်မီးဖို,3ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အဓိကအားဖြင့်ဗိသုကာအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်. Zhaoqing Guangning Yongshun Aluminum Co., Ltd. anရိယာဖုံးလွှမ်း 55,000 စတုရန်းမီတာ, ရှိပါတယ်4အပြည့်အဝအလိုအလျောက်လူမီနီယံ extrusion လိုင်းများ,2ကြီးမားသောလူမီနီယံလှံတံကိုသွန်းမီးဖိုနှင့်2ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် electrophoresis ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, နှင့်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မှုန်ရေမွှားထားပါတယ်, Yongshun Aluminum Co. , ၏ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, Ltd. အမျိုးမျိုးသောဗိသုကာအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများနှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှုလိုအပ်သောစက်မှုလူမီနီယံ profile များကိုများထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုသည်.
1. ပြတင်းပေါက်များအတွက်လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို &တံခါးကို
1. အပူနစ်သို့မဟုတ်ရေတိုင်ကီများအတွက်လူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်း
2. အလင်းသို့မဟုတ် Led ဘောင်များအတွက်အလူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းကို
3. မျက်နှာပြင်ဘောင်များအတွက်လူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းကို
4. စက်မှုပြွန်များအတွက်လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်းကို
5. T-slot အတွက်လူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းကို
လူမီနီယံ Window နှင့်တံခါး
2. လူမီနီယံ casement ပြတင်းပေါက်နှင့်တံခါး
4. လူမီနီယမ် roller ရှပ်တာသို့မဟုတ်ရှပ်တာပြတင်းပေါက်နှင့်တံခါး
5. လူမီနီယံ Non အပူချိုးပြတင်းပေါက်နှင့်တံခါး
လူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုး / guardrail
စက်မှုလူမီနီယံ profile များကို
အဓိကအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ပြည်တွင်းရေးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် (အပူနစ်မြုပ်, mainboard အစိတ်အပိုင်းများ, display frames, ပြင်ပဘောင်, စသည်တို့), အလုပ်ပလက်ဖောင်း, ဖုန်မှုန့် - အခမဲ့အလုပ်ခွင်, စက်မှုပိုက်, LED အလင်းဘောင်များ, မီးခွက်များ၊.
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများလူမီနီယံ profile များကို
အဓိကအားဖြင့်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုသည်, မျက်နှာပြင်ပြတင်းပေါက်, စတုရန်းပြွန်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ပိုက်တည်ဆောက်ခြင်း, အတွင်းပိုင်းအလှဆင်, ကုလားကာနံရံများ.
အဆောက်အ ဦး အားလုံးအမျိုးအစားများအတွက်သင့်လျော်သော, ရုံးတံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ.
လှေကားများအတွက်သင့်လျော်သော, လသာဆောင်ရထားလမ်း, ဥယျာဉ်ရထားလမ်း, utility ခြံစည်းရိုးနှင့်လမ်းခွဲဝေ.
CE အသိအမှတ်ပြု, RoHS, SGS လက်မှတ်, ISO9001, ISO14001
Changyuan Aluminum တွင်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ ၂ ခုရှိသည်, စုစုပေါင်း 11 အပြည့်အဝအလိုအလျောက်လူမီနီယံ extrusion လိုင်းများ (500-2500 တန်ချိန်), တပ်ဆင်ထားသည်4ကြီးမားသောအရည်ပျော်မီးဖိုများ,2ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် electrophoresis အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, နှင့် 1 လိုင်စင်ပြားကိုလေပေါ်မှာပ. အဆိုပါမှိုထက်ပိုရှိပါတယ် 30,000 အစုံနှင့်နှစ်ပတ်လည် output ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 50,000 တန်ချိန်.
Changyuan Aluminum ၏အဓိကအရောင်းစျေးကွက်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်, ဂျာမနီ, အီတလီ, နယ်သာလန်, ဆွီဒင်နှင့်အခြားဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများ, အဖြစ်အိန္ဒိယကဲ့သို့သောထွန်းသစ်စစျေးကွက်, ဗီယက်နမ်, ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, ထိုင်းနိုင်ငံ, စင်္ကာပူ, စသည်တို့, နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်. အပူပိုင်းကျွန်းများတွင်, သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခိုသောထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကစျေးကွက်ဖြစ်သည်.
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးချဲ့တဲ့ကာလပြီးနောက်, ကျနော်တို့ပြင်သစ်မှတင်ပို့ကြပါပြီ, ပြင်သစ် Reunion ကျွန်း, နယ်သာလန်, ကူရာ, Mauritius နှင့်ပို့ကုန် 200-300 အိန္ဒိယသို့လစဉ်အလူမီနီယံပရိုဖိုင်းတန်ချိန်များစွာရှိသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု //////////////////